alxanka rotator - Shiinaha Langzhi Alxanka Qalabka
rotator alxanka Alxanka rotator waa qalabka kaaliyaha waayo alxanka isticmaalka. Si aad u hesho booska saxda ah via garkooda iyo revolving.Uesd la manipulator iyo alxanka, sida xarunta alxanka si toos ah ama sidii rotator workpiece markii buuga ay qaataan welding.We VFD sidii gacanta ku xawaaraha taas oo uu leeyahay sanduuq accurancy sare .control ahaan gaari karaan bartilmaameedka of dheer masaafada ama qalliin ku xirid markii interface la manipulator iyo alxanka. rotator alxanka ka kooban qalab Janjeeri iyo iilan device.To heli alxanka loo baahan yahay ama a ...
rotator alxanka waa qalabka kaaliyaha waayo alxanka isticmaalka. Si aad u hesho booska saxda ah via garkooda iyo revolving.Uesd la manipulator iyo alxanka, sida xarunta alxanka si toos ah ama sidii rotator workpiece markii buuga ay qaataan welding.We VFD sidii gacanta ku xawaaraha taas oo uu leeyahay sanduuq accurancy sare .control ahaan gaari karaan bartilmaameedka of dheer masaafada ama qalliin ku xirid markii interface la manipulator iyo alxanka.
rotator alxanka ka kooban qalab Janjeeri iyo iilan device.To heli alxanka loo baahan yahay ama xagal assemblying via qaadista madal. gacanta ku xawaaraha Platform waa VFD taas oo horseedaysa speed.Customize ah alxanka ku qanacsan yahay la heli karo si waafaqsan looga baahan yahay.
: Previous alxanka rullaluistemadka jeestay
Next: mashiinka la xiriirinaya